Niova ny mpitantana ny zandary!
2017-04-20 @ 23:13 in Ankapobeny
Tsy mpanaraka vaovao loatra intsony, indrindra fa ny vaovao eto Madagasikara, saingy misy hatrany ny hevitra manokana isaky ny zavatra mitranga mba hitan'ny maso. Tamin'ny faran'ny volana marsa sy ny fiandohan'ny volana avrily ny tena nahita ny fanadiovana lalana manodidina ny zaridainan'Ambohijatovo sy ny fanapahana ny bozaka lava tao amin'io zaridaina io ihany. Ny vaovao no nahitana fa hatreny Anosy sy manodidina ny kianjan'i Mahamasina no nanaovan-dry zareo izany fihetsika izany. Andron'ny Zandary, hono, ireo andro ireo. Izaho kosa nahita zavatra hafa tao ambadik'izany ary mety ho nitovy hevitra tamin'ny tena ihany koa ny ao amin'ny governemanta matoa nanao io fanovana ny sekreteram-panjakana misahana ny zandary io.
Ny voamarika voalohany ary dia ny toerana nanaovana ny asam-panadiovana: Ambohijatovo, Anosy sy Mahamasina. Toerana afovoan-tanàna efa nitrangana fivorivorian'olona ireo toerana ireo ary ny kianjan'ny 13 mey irery ihany no tsy tafiditra. Angamba tsy natao intsony ity farany ity satria efa nosoloina dobon-drano ny toerana nahafatesan'olona voalohany indrindra tamin'ny tolom-bahoaka teto Antananarivo hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena, niampy fantsitsitran-drano izany. Manaraka izany ihany koa, tsy fandiavan'olona mandeha tongotra loatra intsony koa io toerana io ary efa madio hatrany amin'ny ankapobeny ka tsy mila diovina intsony. Ankoatra izay dia efa nanaovana fivoriana politika na fanarahana toe-draharaha indrindra ireo toerana voatonona ireo.
Heverina noho izany fa misy sariohatra napetraky ny zandary na ireo mpitarika azy ny nisafidianana ny fanadiovana ireo toerana roa ireo ary nanamafy ny hevitro ny tohin'io asam-panadiovana io. Nitranga ny "Raharaha Claudine" notarihan'ny BIANCO izany niafara tamin'ny fampandosirana any ivelan'ny firenena ilay ramatoa noampangaina tamin'ny raharaha fanodikodinam-bola maro teto Madagasikara. Raha nanandratra ny nataon'ny BIANCO ny maro, izaho kosa toa nanao antso an'efitra raha nilaza fa tsy nahavita na inona na inona ny famotorana nataon'ity Birao Miady amin'ny Kolikoly ity raha tsy nisy ny rantsana mpampihatra ny lalàna dia ny Zandary ihany, nomarihako mazava tao amin'ny Facebook io ho an'izay namana na manaraka ao amin'io tambajotran-tserasera io.
Mariho fa raha nitondra olona teny amin'ny BIANCO ny Senatera Riana Andriamandavy VII dia ny zandary irery no niambina ny vavahady tsy idiran'ireo tangoron'olona ireo ny Birao. Tsy afa-nanamarina na nandiso izay nitondra ilay ramatoa ho eny amin'ny HJRA indray aho rehefa nodidian'ny CPAC hotazonina vonjimaika eny Antanimora Rtoa Claudine fa no nolazain'ny mpitati-baovao dia hoe EMMOREG no nitari-dalana azy. Dia jereo ihany koa ny ny Polisy misahana ny Sisintany, fa tsy ny Zandary, no nanoha-riana nilaza andro vitsy taorian'ny fampandosirana an-dRtoa Claudine fa ara-dalàna tsara ireo taratasy nahafahana nandefa azy hivoaka an'i Madagasikara.
Koa aza atao mahagaga raha nisy ny fanovana ny mpitarika voalohany ny zandary teo anivon'ny governemanta satria mahafantatra tsara ny loza mitatao aminy nanoloana ny fiaraha-miasan'ny BIANCO sy ny Zandarimaria ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Ho hitantsika eo izay hataon'ny Zandary amin'izao fanovana ny mpitarika azy izao sy ny fitohizan'ny fiarahan'ny BIANCO sy ny Zandary miasa. Eritreritra mba mandalo, efa tokony nosoratana hatry ny nahitana voalohany ny fanadiovana nataon'ny zandary fa niova mpitondra ry zareo vao tery hanoratra fandrao mandalo tsy misy mahita ny zava-nitranga teto amin'ny firenena mba tsikaritry ny tena.
Jentilisa, Isahafa 20 avrily 2017 amin'ny 11 ora sy 11 minitra alina.